Uyenza njani iMidlalo njengeNtaka eFlappy ekuqaleni
Ngaba ukhe wadlala Intaka eqhwaqhwazelayo? Uya kwenza umdlalo osebenza kancinci Intaka eqhwaqhwazelayo kodwa AKUKHO Intaka eqhwaqhwazelayo . Ngoba kutheni? Kuba ukuba wenza umdlalo okhangeleka kwaye usebenza ngathi Intaka eqhwaqhwazelayo kwaye uyayibiza Intaka eqhwaqhwazelayo , ke umntu owadala Intaka eqhwaqhwazelayo ngekhe ayithande. Kwaye ngaphezulu, inxamnye NOMTHETHO!
Ke, endaweni yoko, uya kwenza umdlalo obiziweyo Ukuqhwaba iBat .
Yenza iprojekthi ekwi-Intanethi
Yiya e Khangela iwebhusayithi kwaye ucofe i Yenza iqhosha.
Guqula igama kwi Akukho sihloko ukuya Ukuqhwaba iBat .
Ngelixa ungene, iScratch iya kuyigcina ngokuzenzekelayo iprojekthi yakho ngelixa usebenza.
Yenza iprojekthi ngaphandle kweintanethi
Vula i-Scratch 2 Offline Editor kwikhompyuter yakho.
Iziphumo zecala lehydrochlorothiazide / triamterene
Khetha iFayile → Gcina njenge kwaye uchwetheze Ukuqhwaba iBat .
Ngalo lonke ixesha usenza iprojekthi entsha yokuKhangela, iya kubandakanya isprite enye, iScratch mascot: Scratch Cat.
Ungayicima ikati (okanye nayiphi na enye into) ngokubamba iqhosha leShift kwikhibhodi yakho ngelixa ucofa ngokuthe ngqo. Imenyu encinci iya kuvela kunye nenketho yokucima nantoni na oyicofileyo. Uya kuba wenza okuninzi ucofa iShift ukugcina ixesha lakho ngelixa usebenza kwiiprojekthi zokuqala.
idosi ephezulu yelasix
Ke qhubeka. . . Cima ikati encumileyo!
Ukuba uqhele ukucofa ekunene nge mouse okanye ngethrafikhi, ungasebenzisa obu buchule njengenye indlela yokuchofoza iShift.
Khetha i-Player sprite
UKUYA isitshizi nayiphi na into ebonisa umzobo kwiprojekthi yokuqala ngaphandle kwe Inqanaba , emele imvelaphi. Kulo mdlalo, uya kwenza i-sprites ezintathu: Umdlali, uMhlaba, kunye nePayipi.
Khangela indawo entsha yeSprite phantsi kweSigaba kwaye nqakraza uphawu lokuqala. Khetha i-Sprite kwiThala leencwadi.
Khetha i-sprite egama linguBat2 kwaye ucofe u-Kulungile.
Cofa uShift kwi-Bat2 sprite kwaye ukhethe uLwazi.
Guqula igama lisuke kuBat2 liye ku Umdlali kuba, kumdlalo wakho, umdlali uya kulawula i-bat sprite.
Cofa kwiqhosha elingasemva (unxantathu omhlophe kwisangqa esiluhlaza) ukuvala ulwazi lwewindows.
Ipeyinti yomhlaba ophantsi
Kwindawo entsha yeSprite, cofa i icon yesibini: Paint New Sprite.
Shift-nqakraza i-sprite entsha, khetha Ulwazi , kwaye utshintshe igama libe ngu Phantsi .
Cofa kwithebhu yesinxibo.
Cofa kwisixhobo soxande kwi-Paint Editor canvas phantsi kwethebhu yeeNdleko.
Cofa ukhetho lwexande oluqinileyo.
Cofa umbala ohlaza oluhlaza.
Iziphumo ebezingalindelekanga ze-zanaflex
Cofa kufutshane nekona elingezantsi lasekhohlo lepeyinti yoMhleli wePeyinti emva koko tsala uye ngasekunene de ube noxande kuyo yonke indlela engezantsi.
Ukuba umhlaba sprite ubonakala ungekho embindini kwiSiteji, cofa uze uwuhudulele endaweni yawo.
I-phenylephrine hcl 10 mg idosi
Ipeyinti yePipe sprite
Injongo yomdlalo wakho kukutsiba amaphiko ebhetti kwaye ubhabhe ngemingxunya phakathi kwemibhobho emibini. Uya kusebenzisa iqhinga elipholileyo lenkqubo ukuze ufune kuphela iPipe sprite enye.
Cofa i Paint entsha ye-Sprite icon.
Cofa u-Shift ucofe i-sprite, ukhethe Ulwazi , kwaye utshintshe igama libe ngu Umbhobho .
Cofa umbala ongwevu.
Cofa kwaye utsale ngaphaya embindini wepeyinti yoMhleli wePeyinti ukuzoba umbhobho othe nkqo.
Ukwenza umngxunya wokubetha ilulwane, cofa isixhobo Khetha, cofa uze utsale ngaphesheya kumbhobho, kwaye ucinezele Cofa okanye Backspace iqhosha kwikhibhodi yakho. (Ungakhathazeki ukuba i-bat yakho inkulu kakhulu; uya kuyilungisa kungekudala.)
Umsebenzi omhle! Ngoku unayo yonke imithombo emithathu ekufuneka uyenzile umdlalo wakho. Yintoni elandelayo elandelayo? Imvelaphi emhlophe icacile. Nantsi indlela ekhawulezayo yokwenza isibhakabhaka esinyani.
Ipeyinti yesibhakabhaka kumgangatho weSigaba
Igama elithile ithambeka inokuba intsha kuwe. Ukukrola kubandakanya iintlobo ezintathu zegradients, ezikuvumela ukuba uphele phakathi kwemibala emibini. Inxalenye yento eyenza isibhakabhaka sikhangeleke ngokwenyani kuxa ibonakala ikhanya ngakumbi ukujikeleza kwaye kumnyama phezulu kwiscreen sakho somdlalo.
Cofa iqhosha leSigaba.
Cofa kwiTebhu yangemva.
m523 kwelinye icala 10/325
Khetha ukugcwalisa isixhobo soMbala.
Cofa iqhosha leGradient Horizontal.
Khetha umbala omhlophe.
Cofa indawo yokutshintsha imibala.
Khetha ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka.
Cofa naphina ukuze ugcwalise i-Paint Editor canvas ngombala wegradient.
Ngaba isibhakabhaka asikhangeleki siyinyani ngoku? Iigradients zinokusetyenziselwa zonke iintlobo zeziphumo (njengokwenza into ijongeka isinyithi). (Ngaba kukho umntu owathi, Vector Robots?)
h 115 ipilisi yexabiso lesitalato
eyona mg iperococet
Njani dm abantu kwi-twitter
iziphumo ezibi zolwelo
ubushushu bendlebe obuqhelekileyo kubantu abadala
Ukucebisa ukubanda kunye nomthamo wesinus